Fitbit Versa: Especificaciones del nuevo smartwatch barato | Androidsis
အက်ဒါဖာရီနို | | စမတ်နာရီ
Fitbit သည် smartwatch ကဏ္inတွင်လူသိအများဆုံးအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကြီးထွားလာပေမယ့် Android Wear (ယခု Wear OS) နဲ့တွဲသုံးနေတဲ့ကဏ္ sector တစ်ခု။ ယခုအမှတ်တံဆိပ်သည်စမတ်နာရီသစ်ကိုစျေးကွက်တွင်တွေ့ရသောစျေးအသက်သာဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ Fitbit Versa အကြောင်းပါ.
ကျွန်တော်တို့၏ဒီဇိုင်းကိုစျေးကွက်ရှိအခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်များမှုတ်သွင်းထားသောနာရီတစ်လုံးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးသတ်မှတ်ချက်များအချို့နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုထွက်ခွာပေမယ့်။ ဒါကြောင့်ဒီ Fitbit Versa ကကျွန်မတို့ကိုခံစားချက်ကောင်းတွေထားပေးတယ်. ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏နာရီအသစ်မှကျွန်ုပ်တို့အဘယ်အရာမျှော်လင့်နိုင်သနည်း။
နာရီ၏ဒီဇိုင်းကို Apple Watch မှမှုတ်သွင်းထားပုံရသည်, ဒီစျေးကွက်ယနေ့လွှမ်းမိုးသောလက်ပတ်နာရီ။ ဒါပေမယ့်တကယ်ကိုကူးယူစရာမလိုဘဲမှုတ်သွင်းခံနိူင်သည့်အရာမဟုတ်ပါ။ ဥပမာပုံရိပ်တွေမှာတူညီတာတစ်ခုတွေ့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့် Apple ရဲ့စမတ်နာရီနဲ့မတူပဲ.
Fitbit Versa သည် Wear OS နှင့်အတူဈေးကွက်သို့မရောက်ရှိပါ။ ၎င်းသည် multiplatform နာရီတစ်လုံးဖြစ်သည် Android, iOS နှင့် Windows Phone များနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကအများကြီးကျယ်ပြန့်တဲ့ပရိသတ်ကိုမှလွတ်မြောက်လာကြသည်။ မည်သူမဆိုဒီနာရီကိုသုံးနိုင်သည်ကတည်းက။
ဘက်ထရီ ၎င်းသည် Fitbit Versa ၏အားသာချက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုကတိပေးသည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းကို4ရက်အသုံးပြုမှုပေးလိမ့်မည်ကတည်းကဒီနာရီဟာသင်ဒီနာရီကိုဘယ်လိုအသုံးပြုသလဲဆိုတာပေါ်မူတည်ပြီးဒီထက်နည်းလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်အခြားလုပ်ငန်းဆောင်တာများအကြား, NFC မှာငွေပေးချေမှုရှိတယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးခုန်နှုန်းနှင့်ကာယလှုပ်ရှားမှုများကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းကဲ့သို့သောပုံမှန်လုပ်ဆောင်မှုများကိုလုပ်ဆောင်ပေးလိမ့်မည်။ နာရီ မီတာ 50 အထိနစ်မြုပ်နိုင်ပါတယ်.
ဤသဘောမျိုးဖြင့် Fitbit Versa သည်အားကစားလှုပ်ရှားမှုများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည့်အလွန်ရိုးရှင်းသောစမတ်နာရီဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်လည်းစဉ်းစားရန်အပိုဆောင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု, မက်ဆေ့ခ်ျသို့မဟုတ်ဖြစ်ရပ်များကိုအကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်ကတည်းက။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့အတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ်ရှိသည် ကျွန်တော်တို့ကို 300 ကျော်သီချင်းတွေကိုသိမ်းထားဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ အားကစားလုပ်နေစဉ်အတွင်းနားထောင်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ စမတ်နာရီသည်အိပ်စက်ခြင်းကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းတွင်လည်းကူညီလိမ့်မည်ဟုကတိပြုသည် အိပ်ပျော်စဉ် apnea ကိုဖမ်းယူကူညီသောအာရုံခံကိရိယာ.
နာရီကိုမကြာမီဈေးကွက်တွင်စတင်မိတ်ဆက်တော့မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အရောင်အမျိုးမျိုးနှင့်သိုင်းကြိုးပေါင်းစပ်မှုများတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒီ Fitbit Versa ၏ပေါင်းစပ်မှုအားလုံးကိုယူရို ၁၉၉ ဖြင့်ရောင်းချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အထူးဗားရှင်း 229 ယူရိုကုန်ကျမည်ဟုပေမယ့်။ ဒီအမှတ်တံဆိပ်နာရီအသစ်ကသင်ဘယ်လိုထင်လဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » စမတ်နာရီ » Fitbit Versa: အမှတ်တံဆိပ်၏စျေးပေါသောစမတ်နာရီ
Vivo V9၊ အင်္ဂါရပ်များ၊ ဗွီဒီယိုများနှင့်အခြားပုံများပေါက်ကြားစေသည်
Android အတွက် YouTube ကမှောင်မိုက်တဲ့စနစ်စတင်တော့သည်